Watch: More Zulus South Africans Reinforces As they Move to Hillbrow, to Chase Out Zimbabweans - Opera News
As the crisis between Zimbabweans and south Africa hit up again following the catastrophic incident that took Place after a Zimbabwean man Allegedly shot some group of south Africans to death.
The incident was so terrible that more than Hundreds south African took to their various social media platforms demanding justice for those south African who were Allegedly killed by some group of Zimbabweans in Hillbrow.
While things are trying to be slowing down, a popular south African man took his Twitter account announcing to his fellow South Africans, that Zulu south Africans tribe are reinforcing preparing to go to Hillbrow and cause Zimbabweans Away from their.
In your own perspective view what can you say about the current situation that is going on in south Africa Now, especially conflict between Zimbabweans and zulu?
Africa South Africans Zimbabweans Zulu Zulus
6 hours 1558